အဘယ်အရာကို Phishing နှင့်အီးမေးလ်အယောင်ဆောင်များလိုပဲကွညျ့ရှု
ဝက်ဘ် & ရှာရန် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး
အင်တာနက်ကိုဒါ့အပြင် phishing scam များနဲ့, ဥပမာ 1
ဤတွင်သူတို့က, ထုတ်ဖော်ပြသနေကြသည်: အ phishing အင်တာနက် con ဂိမ်းများကို။ သူတို့ကသင့်ရဲ့နှလုံးညှို့ဆွဲ, အဝိဇ္ဇာသားကောင်နှင့်လျှို့ဝှက်စွာသင့်အကောင့်နံပါတ်များနှင့် passwords ယူနေချိန်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုကတိပေး။ ဤအစည်းရုံး phishing အီးမေးလ်များနှင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုအားဖြင့် suckered ရမနေပါနဲ့! ဆယ်မိနစ် ယူ. phishing နဲ့အီးမေးလ် Scan ကိုတကယ်တူအောင်အဘယ်အရာကိုအင်တာနက်ကြည့်ရှုပါ။
ဖြစ်ကောင်းအီးမေးလ်ကို Spoof ၏အများဆုံးထိခိုက်ကြင်နာက "phishing" အီးမေးလ်ကဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှု၏ဤအမျိုးအစားနှင့်အတူတစ်လိမ္မာပါးနပ် con အနုပညာရှင်တစ်ခုခုဝယ်ဖို့ဖို့မသင်ဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်ဘဏ္ဍာရေးအမြတ်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်သင့်အကောင့်နဲ့ password သတင်းအချက်အလက်, ရိုက်ထည့်ပါရန်။ ကို eBay နှင့် PayPal ကဘုံပစ်မှတ်များမှာပေမယ့်, မည်သည့်ကုမ္ပဏီတရားမျှတတဲ့ကစားပွဲဖြစ်ပါတယ်။ သာအထက်တွင်ဒီဥပမာ phishermen သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များ divulging သို့သငျသညျ con ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်နည်းလမ်းများစွာထဲကတစ်ခုပြသထားတယ်။
အီးမေးလ်အတွက် link တစ်ခုမှတဆင့် login ရန်သင့်အားတောင်းဆိုကိုအီးမေးလ်နှင့် ပတ်သက်. သံသယရှိကြလော့။ အဘယ်သူမျှမတရားဝင်အွန်လိုင်းဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအစဉ်အဆက်ကဤလမ်း login ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှု, ဥပမာ 2: Pump နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ်သိမ်းရန်
အားလုံး con ဂိမ်းလိုပဲ, သူတို့ con လူကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့သင်လှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်, အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးအတွက်ရှိစေသတည်း။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, artifically တစ်စတော့ရှယ်ယာန်းကျင်စိတ်လှုပ်ရှားထုတ်လုပ်အားဖြင့်, con ယောက်ျားတစ်ဦးအထူးသဖြင့်စတော့ရှယ်ယာဝယ်ယူလူရာပေါင်းများစွာဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ဝယ်ယူမှုစိတ်လှုပ်ရှားသူတွေဟာ inflates နှင့် con လူတို့သညျမရိုးမသားအမြတ်အစွန်းအသီးအနှံကိုရိတ်ရမှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရှယ်ယာရောင်း "အရေးပေါ်သိမ်းထား" ပါလိမ့်မယ်ညျကြိ, စတော့ရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုး "ကိုတက်ညှစ်ထုတ်လိုက်" ။ ဤ "စုပ်စက်နှင့်အရေးပေါ်သိမ်းထား" စပမ်တရားမဝင်ဖြစ်သည့် "Phantom ကုန်သွယ်" တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
စတော့ရှယ်ယာအကြံပေးချက်များကတိပေးထားကြောင်းဆိုကျပန်းမလိုလားသောအီးမေးလ်ကအကြောင်းကိုသံသယဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအတရားဝင်စတော့ရှယ်ယာအကွံဉာဏျနှင့်အတူတရားဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခဲ့ကြပါလျှင်, သူတို့ကကျပန်းအီးမေးလ်ကနေတဆင့်စုဆောင်းမဟုတ်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တည်ဆဲ clients များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်မည်ဖြစ်သည်။ မဆိုစမတ်သံသယနှင့်ဝသကဲ့သို့: ကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းပါတယ်လျှင်, ဖြစ်ကောင်းတဲ့လိမ်လည်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကိုထီလိမ်လည်မှု, ဥပမာ 1
အားလုံး con ဂိမ်းလိုပဲ, သူတို့ကအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးအတွက်ဖြစ်သည် con ယောက်ျားသည်သင့်ငွေသားသို့မဟုတ်သင့်ငွေမှဝင်ရောက်ခွင့်နှငျ့အတူသူ့ကိုအပ်နှံဖို့ကြိုးစားနေသည်။
သင်တစ်ဦးဆုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီမလုပ်ပဲမကိုအီးမေးလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သံသယဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးကတရားဝင်ထီအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်မဟုတ်ဘူး; သူတို့တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်သင်ခေါ်ဆိုခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ထိုအသတိရ: သင်ပြိုင်ပွဲဝင်ကြ၏ဘယ်တော့မှလျှင်, သင်မည်ကဲ့သို့အနိုင်ရခဲ့တာလဲ မဆိုစမတ်သံသယနှင့်ဝသကဲ့သို့: ကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းပါတယ်လျှင်, ဖြစ်ကောင်းတဲ့လိမ်လည်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကယောဘကိုကမ်းလှမ်းချက်လိမ်လည်မှု, ဥပမာ 1
အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းကတိပေးထားတယ်ဆိုကိုအီးမေးလ်နှင့် ပတ်သက်. သံသယရှိကြလော့။ ဒါကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းပါတယ်ဆိုပါကဖြစ်ကောင်းတဲ့လိမ်လည်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကို 419 လိမ်လည်မှု, ဥပမာ 1
ပိုက်ဆံရွှေ့ဖို့တောင်းဆိုအီးမေးလ်, အထူးသဖြင့်ငွေအမြောက်အမြားအကြောင်းကိုသံသယဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးကတရားဝင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပိုက်ဆံ၏ကြင်နာရွှေ့ဖို့တရားဝင်နည်းလမ်းကိုအသုံးလိမ့်မယ်။ သူတို့သာ Semi-တရားဝင်ခဲ့ကြသည်ရင်တောင်: အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကကျပန်းအီးမေးလ်ကတဆင့်ကျပန်းလူတွေကိုဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရွှေ့ဖို့ကိုရှာဖွေမလဲ မဆိုစမတ်သံသယနှင့်ဝသကဲ့သို့: ကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းပါတယ်လျှင်, ဖြစ်ကောင်းတဲ့လိမ်လည်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကိုဒါ့အပြင် phishing scam များနဲ့ဥပမာ 2
အားလုံး "phishing" အီးမေးလ်များနှင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးလိမ္မာပါးနပ် con အနုပညာရှင်သင့်အကောင့်နဲ့ password သတင်းအချက်အလက်ဝင်ရောက်သို့သင်ဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ကို eBay နှင့် PayPal ကအသုံးပြုသူများကိုအများဆုံး phishermen အားဖြင့်ပစ်မှတ်ထားလူ ဖြစ်. နေစဉ်, မည်သူမဆိုထိုသူတို့အဘို့တရားမျှတတဲ့ကစားပွဲဖြစ်ပါတယ်။ သာအထက်တွင်ဒီဥပမာသူတို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂလိက login သတင်းအချက်အလက်များ divulging သို့သငျသညျ con ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်နည်းလမ်းများစွာထဲကတစ်ခုပြသထားတယ်။
အင်တာနက်ကိုဒါ့အပြင် phishing scam များနဲ့ဥပမာ 3
အင်တာနက်ကိုထီလိမ်လည်မှု, ဥပမာ 2
အင်တာနက်ကိုဒါ့အပြင် phishing scam များနဲ့ဥပမာ 4
အဆိုပါ 419 ကအင်တာနက်လိမ်လည်မှု, ဥပမာ 2:
အင်တာနက်ကို 419 လိမ်လည်မှု, ဥပမာ 3
အင်တာနက်ကိုလိမ်လည်မှု: 419, ဥပမာ 4
အင်တာနက်ကို 419 လိမ်လည်မှု, ဥပမာ 5
အင်တာနက်ကို 419 လိမ်လည်မှု, ဥပမာ 6
အင်တာနက်ကို 419 လိမ်လည်မှု, ဥပမာ 7
အင်တာနက်ကို 419 လိမ်လည်မှု, ဥပမာ 8
အင်တာနက်ကို 419 လိမ်လည်မှု, ဥပမာ 9
အင်တာနက်ကိုထီလိမ်လည်မှု, ဥပမာ 3
အင်တာနက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှု, ဥပမာ 3: Pump နှင့်စွတ်လိမ်လည်မှု
အင်တာနက်ကိုထီလိမ်လည်မှု, ဥပမာ 4
အင်တာနက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှု, ဥပမာ 4
အင်တာနက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှု, ဥပမာ 5
အစုံလိုက်သုံး packet Sniffing ဖို့နိဒါန်း
* 67 နှင့်အတူသင့်ရဲ့နံပါတ် Hide လုပ်နည်း
အွန်လိုင်း scam များနဲ့ malware မှစ. အဆိုပါသက်ကြီးရွယ်အိုများအားကာကွယ်ခြင်း
သင့်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Killing နေဒါက7ငျြ့ဆိုး
တစ်ဗိုလ်မှူးလုံခြုံရေးဆူပူမှုပြီးနောက်သင့် Computer ကိုလုံခြုံအောင်
အစဉ်အဆက်ကိုအဆိုးဆုံးက Android ဖုန်းကို Hack
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိက bouncers သို့မဟုတ်ဧည့်ကြိုထဲသို့ Google Voice ကို Turn
အဆိုပါ 8 Grindr အပေါ်ယောက်ျားများသင်ဟာတွေ့ဆုံ (ထိုအအခြားသောဂေး Apps ကပ)
Instagram ကိုအဘို့အစာကြမ်းများ Save
Open Source နှင့်အတူသင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ချက်ပြုတ်နည်း Organizing
Icy မျှော်စင် - အခမဲ့ PC ကိုဂိမ်း
သင့်ရဲ့ BlackBerry ကိုစက်ပေါ် Skype ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အခြေခံပညာတွစ်တာပြောပြလိုပါသည် & အတိုကောက်နားလည်ခြင်း
Bitly ဆိုတာဘာလဲ လူမှု Link ကိုမျှဝေခြင်း Tool ကိုမှတစ်ဦးမိတ်ဆက်ခြင်း
Google Earth ဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး, iPod မွှေနှောက်ကိုအားသွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
အံ့အားသင့်စရာ Upgrade LG က OLED တီဗီတောင်မှ သာ. ကောင်း၏ကို
ဂျီမေးလ် Keyboard Shortcuts Enable လုပ်နည်း
အိုင်ပက်မှဓါတ်ပုံများကို Download လုပ်လုပ်နည်း
2018 ခုနှစ်တွင် Buy မှ 10 အကောင်းဆုံးဆူညံသံ-ကိုဖျက်သိမ်းပြီးနားကြပ်
အခမဲ့အသံစာအုပ်များသည်ထိပ်တန်း 8 Website များ
ဘယ်လိုရာဇဝတ်သားများ '' ဖြစ်ရပ်မှန်အဆိုပါပူးတွဲ '' ရန် Google Maps Street View ကိုသုံးပါ
ဒါဟာ Recharges နေချိန်မှာသင်ကကို Nintendo 3DS Play နိုင်သလား?
Facebook ကိုစွဲလမ်း Beat5နည်းလမ်းများ
Mozilla Thunderbird နဲ့နှောင်ကြိုးအဖြစ်ကို Message forward